Anọ ọhụrụ atụmatụ na watchOS 8 nke ga-abịa kemfe | Esi m mac
N'ehihie ụnyaahụ na ngosi nke WWDC 2021, anyị nwere ike ịhụ ozi ọma nke ga-etinye ngwanrọ ọhụrụ nke anyị ga-enwe ike imelite na ngwaọrụ Apple anyị n'afọ a. Fewfọdụ n'ime akwụkwọ akụkọ ndị a ga-aga Apple Watch anyị, gụnyere 8 nche nche.
N'ime ha niile, e nwere anọ na n'ikpeazụ nwere ike bụrụ ndị kacha baa uru na ndị anyị na-ejikarị eme ihe. Ka anyi che ya iru: Nye otutu n’ime anyi, o di nkpa ike inwe ike iziga a Anụmanụ na-akpali akpali site na Apple Watch anyị, na anyị nwere ike mepee ụgbọ ala ya. Karịa ihe ọ bụla, n'ihi na imeghe ụgbọ ala gụnyere ịzụ ihe ọhụrụ kwekọrọ na sistemụ ahụ. Ya mere, ka anyị rapara na animation gifs ...
Na isi okwu nke ụnyaahụ enwere ngalaba iji weta ozi ọma anyị ga-ahụ na watchOS 8. Ikekwe maka Apple, nke kachasị mkpa bụ ngwa ahụ. Na-atụgharị uche iji nyere gị aka ilekwasị anya ma zuru ike, ngwa Home emezigharị iji chịkwaa ụlọ gị nke ọma site na nkwojiaka gị, mmelite na ngwa ahụ obere akpa, wdg. Agbanyeghị, enwere ọrụ ndị ọzọ "pere mpe" maka ụlọ ọrụ ahụ ga-abara anyị uru nke ukwuu.
1 Ihe nkiri gif
2 Dị iche iche Ngụọge
3 Chọta ihe na ngwaọrụ
Ihe nkiri gif
na Ihe nkiri gif na-ewu ewu. Ha na-ekwu na a foto bụ uru a puku kwuru. Ma ọ bụrụ na ihe oyiyi ahụ dị n'elu na-emegharị ahụ, ha ga-aghọ puku iri. Ma na nkeonwe ma ọ bụ na-akparịta ụka (ma ọ bụrụ na onye isi gị na-enye ya ohere), GIF ndị na-eme ihe nkiri abụrụla nri anyị kwa ụbọchị.
Ya mere na watchOS 8 anyị nwere ike izipu gifs kpọmkwem site na nkwojiaka gị site na ngwa nke Ozi dị ka ị pụrụ ime ya na iPhone. Nke a pụtara na ị nwere ike ịchọ GIF kacha mma ị nwere ike iche ma ziga ya na ozi sitere na Apple Watch gị.
Ọrụ nke m ji n'aka iji, ọkachasị mgbe mụ na Apple Watch LTE m nọ na enweghị iPhone na aka.
Na mgbakwunye na GIF, ị nwekwara ike iji Doodles, Dictation, na emojis, ha niile n'otu ozi na Apple Watch. Yabụ ị nwere ike ịpị ngwa ngwa, kwuo okwu ma ọ bụ jiri emojis mee ka ịchọrọ ide ozi gị na-ahapụghị otu ihuenyo.
Dị iche iche Ngụọge
Ọ na-ada ka bullshit, mana ọ bụghị. Ọhụrụ melite anyị ga-enwe ike inwe ọtụtụ ngụ oge imekotaotuugbo, ma na-agụ ọtụtụ ihe ozugbo. Ọ bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na ị na-esi nri ọtụtụ efere n'otu oge, yana ịchọrọ ijikwa oge nke ihe ọ bụla, dịka ọmụmaatụ. Aga m ejikwa ya, obi abụọ adịghị ya.
Chọta ihe na ngwaọrụ
Ruo ugbu a, ngwa ọchụchọ na Apple Watch bụ naanị ịchọta kọntaktị na ikikere ọnọdụ. Na watchOS 8, ị nwekwara ike ịchọta ihe na ngwaọrụ.
Dị ka ọ dị na iPhone, ị nwere ike ịchọ ihe ugbu a (ndị a bụ aha mmado nke ị debanyere aha gị AirTag, dịka ọmụmaatụ "Igodo ụgbọala"). Ma ị nwekwara ike ịchọ ndị ngwaọrụ nke ahụ nọnyeere gị Apple ID. Aga m ejikwa ya, ọkachasị mgbe anaghị m ebu iPhone.
AssistiveTouch na watchOS 8 ga-enyere ndị nwere ogwe aka na aka aka dị iche iche n'ihi na ọ na-enye ohere iji naanị otu ogwe aka na Apple Watch. Nke a ga - eme ka Apple Watch nwee mmetụta mmegharị aka dị mfe kama isoro mmekọrịta nke Apple Watch. Iji sensọ ngagharị Wuru n'ime, ị nwere ike ịza oku, chịkwaa pointer ihuenyo, ma gosipụta menu ihe nke nwere ike ịnweta accesslọ Ọrụ Nkwupụta, Ogwe njikwa, na ndị ọzọ na Apple Watch gị.
Na m ikpe ọ pụrụ ịbụ nnọọ uru. Ma obughi na m furu efu ogwe aka. Naanị n'ihi na m na-ejikarị aka m na-ebu akpa ọrụ m, Apple Watch na-ekpe m. Mgbe m nwere Apple Watch mbụ na-enweghị "Mgbe niile" na ihuenyo, anaghị m emetụ nche na imi m iji hụ ihuenyo ...
Dika m kwuru na mmalite, ejiri m n'aka na anyị ga - eji (opekata mpe m) ndị a njirimara ohuru Ozugbo ha dị na Apple Watch anyị, karịa ikekwe ndị ọzọ na-atụ bọmbụ, dịka inwe ike iji elekere mepee ụgbọ ala ma ọ bụ ọnụ ụzọ ụlọ m.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » Anọ atụmatụ ọhụrụ na watchOS 8 nke ga-abara anyị uru nke ukwuu
Watchdị Apple Watch dakọtara na watchOS 8